Mofonaina 23 Septambra 2014
Asan’ny Apostoly 13:32-39
Tsy mora akory ny fandresen-dahatra ny Jiosy hino fa Jesoa Kristy no zanak’Andriamanitra, izay hany lalana tokana hizorana ao amin’ ny famonjena. I Paoly Apostoly sy I Baranabasy, manamafy indrindra eto fa izay andraisana famonjena dia :
Fialàna ao amin’ny fiheveran-diso : (and.36)
Averin’ireo Apostoly amin’ ny Jiosy eto fa na dia nahatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra hahasoa ny olona aza i Davida, dia nodimandry, tratry ny lo. Izany hoe tsy natao ho azy ny teny fikasana ny amin’ ny vatana tsy mety lo, fa an’i Kristy. Koa ny Jiosy izay mirehereha fa manana an’i Davida na i Mosesy, dia tsy hitondra famonjena ho azy izany. Ny fiorenana ao amin’i Jesoa Kristy no làlan-tokana maha ankohonan’ Andriamanitra. Tsy mahasoa antsika Kristiana koa ny hevi-diso, fiorenana ao amin’ny ray aman-dreny niaviana, fa ny ao amin’ i Kristy ihany.
Fiorenana ao amin’i Jesoa Kristy : (and.38)
Ambaran’i Paoly Apostoly eto, fa raha misy olona te- hovonjena, dia tsy maintsy voavela aloha ny helony. Tsy misy ny famonjena raha tsy misy ny famelan-keloka. Izay mandray an’i Jesoa Kristy ho Mpamonjy ihany no mandray famonjena (Asa,2, 38 : 10, 43). Izany hoe : ny fiorenana tsara ao amin’ i Kristy, no làlana tokana andraisana ny famonjena. Taomina isika hankato ny teny : miorena tsara, aza miova …( I Kor.15, 58 ; I Pet.5, 9) ao amin’ i Kristy Ilay fehizoro indrindra.
Tanisao ireo hevi-diso mitondra antsika ho ratsy fiorenana ao amin’ i Kristy ?